Tag: kutengesa kwevanhu | Martech Zone
Tag: kutengesa munharaunda
NeChishanu, Nyamavhuvhu 17, 2018 China, August 16, 2018 Anna Bredava
Zvemagariro midhiya yekutengesa ndiyo nyowani nyowani yekushambadzira nyanzvi pasirese. Kupesana nekutenda kwechinyakare, zvekushambadzira midhiya zvinogona kubatsira kune chero indasitiri - hazvina basa kana vateereri vako vari zviuru zvemazana kana chizvarwa X, vekuchikoro kana varidzi vemabhizinesi makuru, vanogadzirisa kana mapurofesa ekoreji. Tichifunga nezve chokwadi chekuti kune vangangoita mabhiriyoni matatu vanoshandisa vezvenhau vanoshandisa pasirese, unogona here kutaura kuti hapana vanhu vangade
Uku kwakanaka kunotaurira infographic kubva kuSoutout Social iyo ine mhedzisiro yakadzika kupfuura vatengesi vangave vachida kugamuchira. Iyo infographic inonzi 6 Yemagariro Media Maitiro Anozotora 2017 uye anofamba kuburikidza neeseya enhau midhiya chiteshi, maitiro evatengi ari kuchinja, uye kusimudzira kwetekinoroji senge yekuchenjera kwekunyepedzera. Yakasanganiswa ne-inoda-vhidhiyo, kushambadzira matekinoroji, uye kukura kwe1: 1 chiteshi senge Snapchat uye vashambadziri vanofanirwa kuongorora yavo